အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သမီးလေးရဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်း
30 Responses to “သမီးလေးရဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်း”
ကိုယ်မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို အလွယ်တကူ ပေးကမ်းစွန့်လွှတ်နိုင်ကြပြီး ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေကိုတော့ အလွယ်တကူ စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်..... ဒါမှန်တာပေ့ါ ဒါလူ့အတ္တပဲလေ.. ဒါကိုအလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ခက်တယ်လေ သတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာပဲ လူဆိုတာ ကိုယ့်အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်မိတတ်တယ်လေ... အလွယ်ကူဆုံးဥပမာ တခုပြမယ်... ရီစဆိုလည်းရီစရာလေးပေါ့... လူဆိုတာ !
ကိုယ်က သတိမထားလိုက်မိချိန်မှာတောင် အတ္တလေးကရှေ့တန်းက... ရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးပါ.... ဥပမာပေါ့... အဖွဲ့လိုက်ရိုက်ကျတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတခုကို တွေ့တဲ့အခါ အဲပုံထဲမှာဘယ်သူ့ကိုအရင်ရှာမိမယ်ထင်သလဲ.... ကိုယ်တိုင်တာ သတိမထားလိုက်မိတာနော်... စဉ်းစားကြည့်လိုက် ဘယ်သူ့ကို အရင်လိုက်ရှာမိမယ်ထင်လည်း.... ဘာမှမဟုတ်တာလေးနော်.... (အဲပုံထဲမှာကိုယ်ပါနေမယ်ဆိုရင်ပေ့ါ)... စဉ်းစားလို့ရလား.... အဒါအတ!
��အချစ်ဆုံးပဲလေ ကိုယ့်ပုံကို အရင်ရှာတယ် နောက်မှသူများကိုကြည့်တာ.... ရီစရာဥပမာလေးပါ.... ခုချောစာထဲကလို သမီးလေးထားတဲ့စိတ်မျိုး လူတိုင်းမှာ ရှိနေရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးရယ်..... ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော ဒီလိုစိတ်မျိုးထားနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးကို တွေးမိတယ်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောရေ... အရမ်းကောင်းပါတယ်.....
သိပ်ကြိုက်တယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဘာသာပြန်လေးပါ။
ညီမ စာလေးတွေ ကို ဖတ်ရတာ စိတ်အားတက်စရာ တွေဘဲနော်
ဒီစာတွေကို ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းတာပဲ .. လူတွေအကုန်လုံး ကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာစိတ်ကိုယ်စီ ရှိကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ ..
မချောဘာသာပြန်ထားတဲ့ အထဲကလိုလူတွေ အပြင်မှာတကယ့်ကို သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြပါတယ်...ဒီဘာသာပြန်ကိုတော့ တော်တော်လေးကို ခံစားမိပါတယ်။ ငါးနှစ်အရွယ် ခလေးငယ်လေး ကတည်းက ဒီလောက်စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ မြင့်မြတ်နေရင်။ နောင်အသက်တွေရ လာရင် ဒီထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်လာမှာပါ။ စာတအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးသလောက်ဆိုရင် ခလေးတယောက်ဟာ ၁ နှစ်ကနေ ၆ နှစ်အထိအရွယ်မှာ သူဘ၀ကိုဘာနဲ့ ဖြတ်မယ်ဆိုတာကို သူ့ဘာသာမသိမသာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်.... ၆ နှစ်အထက်မှာတော့ ပြင်ဖို့သိပ်ခက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေလည်း.......
သိပ်ဟုတ်တယ်ဗျာ.... “လဲ နေသူ ထူ...အား ငယ် သူ အား ပေး...ဆာ လောင် နေ သူ ကိုယ့် အထဲ က တဝက် ဝေ”..စကားလုံး လှ လှ တွေ သာ ဆို တတ် ပြီး၊ လက်တွေ့  ကျ တော့..သိပ် တွေ ဝေ နေ တတ် တဲ့ ကျွန် တော် ၊ အ ကောင်း ထက် အဟောင်း ကို တောင် ရက် ရက် ရော ရော လှူ တန်း ဖို့ တွန့် ဆုတ် နေ တတ် တဲ့ ကိုယ့် စိတ် ကို ကိုယ့် ဖာ သာ ပြင် ဆင် လို့( လိပ် ပြာ သန့် သန့် ရှင် သန် ဖို့) တ သက် တာ ကြိုး စား တော့ မယ် ဗျာ။
ပျော် ရွှင် ချမ်း မြေ့ နိုင် ပါ စေ။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ၊ ခလေးတွေရဲု့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုပြပါတယ်၊ ၅နှစ်အရွယ် သမီးလေးဆိုတာ သိပ်တွေးခေါ်ကြတာမဟုတ်သေးဘူး၊
သမီးလေး အသက်ကြီးလာရင်ရော ဒီလိုပဲ သူမြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေကို စွန့်လှူနိုင်မလား ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးနော်.. လူက အသိဥာဏ်ရှိလာလေ အတ္တကြီးလာလေ ဖြစ်တတ်ကြလို့လေ..
ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ..။ အဲလိုစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ ကလေးတွေ၊ နောက်လူကြီးတွေ အများကြီးရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်။ နေဦး.. ကိုယ်ကအစ အရင်ပြင်မှဖြစ်မယ်..လို့ သတိတရား ရသွားတယ်။ ကျေးဇူးနော်။
အရင်ကမဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့စာတွေပါထက်ပြီးဖတ်သွားတယ်ခင်ဗျ မှတ်လဲမှတ်သွားတယ်နော်ခုလိုစာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေလို့ ကျနော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အတော်တွေးတတ်တဲ့ ကလေးလေးပဲ ၊ ကိုယ်ပျော်သလို သူများကိုလည်း ပျော်စေချင်တဲ့ စေတနာလေးပေါ်လွင် ထင်ရှားတယ်။ တော်ရုံဆို ဘယ်လာတွေးမိမလဲ။ ကောင်းတယ်ဗျာ။
မျှဝေမလှူဖူးဝူး..."ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေကို ပေးကမ်း စွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်း သည်သာလျှင် ရက်ရောတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းမည်တယ်။"
ဒီပို့စ်ထဲက ကလေးလေးတွေလို ကလေးမျိုးတွေ
အပြင်လောကမှာလည်း တကယ်ရှိနေတယ် ချော..ရ..။
ချော..ကို ပြောမိဘူးတယ် ထင်ပါရဲ့..။
ကိုယ် ပိုင် ပစ္စည်း ကို တစ်ပါးသူ ကို ပေး ပျော် စေ နိူင် တဲ့သတ္တိ က
တော်ရုံ လူ ထား နိူင်ခဲ ပါတယ်လို့ ။
အင်း... ဖြည့်ကျင့် မှ ရ မယ် လို့ လဲ ထင်ပါတယ်။
ဖြည့် ကျင့်ရ တယ် ဆို မှ တော့တော်ရုံ အလုပ် တစ်ခု မဟုတ်တော့ဘူး လေ..။
လုပ် လို့ရ ပါ့ မလား...။
ကိုယ်သာဆိုရင် အဲဒီကလေးလေးလို စွန့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား ???
အဲ မက်ရည်တောင် ဝဲတယ် ဘူးသီးလုံးလောက်ရှိတဲ့ မက်ရည်တွေကျချင်လာပီ
ဗြူးးးးးးး ဖလူးးးးးးးးး ဗြစ် ဖတ် နှပ်ညှစ်သံ
ချောရေ ဖက်ရတာရင့်နင့်လိုက်တာဗျာ လူစီလေးကိုပေးနိုင်တဲ့ခလေးကိုမလေးကိုချစ်လိုက်တာ
ဟုတ်တယ် ၊ လူတိုင်းဟာ မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသာစွန့်ကြဲချင်ကြတယ်ဇေလဲပါတယ် ၊ တတ်နိုင်သ
ဟုတ်တယ်နော်... ရက်ရောတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်း ကို အမှန်တော့ အတ္တကြီးကြီးနဲ့ လျစ်လျူရှုမိတတ်ကြတာပဲ... မလိုအပ်တာကို ပေးလိုက်ပြီး ကိုယ်ကပဲ ရက်ရော သလိုလို...
Mary Kie KIe said...
စိတ်ခွန်အား အရမ်းရတယ် အစ်မ ကျေးဇူး....တကယ်ကို ခုမှ ခွဲခွဲခြားခြားသိသွားတယ် ရက်ရောခြင်း အစစ်အမှန်ဆိုတာ..
အရမ်းကောင်းတယ် ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့တင် ရင်ထဲမှာ နင့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ် *ရက်ရောခြင်း* ဆိုတာကိုလည်း ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီးမှ သေသေချာချာ နားလည်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကိုယ် အမြတ်နိုးဆုံး အရာဝတ္ထုဆိုတာ ပေးကမ်းဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
လူငယ်တွေ အတွက်ရော ကျွန်တော်တို့ အတွက်ပါ သင်ခန်းစာ ပေးတဲ့
အမရေ မှန်လိုက်တာ ကိုယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေကို. ပေနိုင်မှ ရက်ရောခြင်းဆိုတာကို ခုမှ ပဲသေချာ သဘောပေါက်ပါတယ် အမရေ..
အစ်မ ရဲ့စာတွေကို ညီမ ရေခဲနန်းတော်မှာ အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့သူပါ။ ကောင်းတဲ့စာလေးတွေကိုလဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးဝေမျှပြီးဖတ်စေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါကိုလဲခွင့်ပြုပေးပါနော်။ အစ်မရေးထားကြောင့်ကိုလဲ အစ်မရဲ့ site ကိုလဲအမြဲတမ်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အခုမှညီမလဲအစ်မ ရဲ site ကိုဝင်ပြီးဖတ်မိ့တာပါ။ အစ်မ ရဲ့စာတွေက ဗပာုသုတနှင့် ပညာတွေအများကြီးရပါတယ်။ အဲဒီလိုစာမျိုးတွေကိုဖတ်ရလို့လဲအစ်မကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအားပေးလျက်ပါ။
တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါ။ သမီးငယ်လေးက အသက်ငယ်ပေမဲ့ အားလုံးအတွက် စံပြမယ်လေးတစ်ယောက်ပါဘဲ။ သူ့လို စွန့်လွတ်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပေါ်ပေါက်လာအောင် အတော့်ကို ကြိုးစားကြရဦးမယ်နော်။
that `s also nice post !
ကလေးလေးက ပေးတဲ့ အသိပေါ့နော်.. ရင်ထဲထိရောက်ပါတယ် မမရေ..